ညီနေမင်း: အင်တာနက်သုံးရင် သိထားသင့်တာလေးတွေ
(၃) firefox ကို သုံးပြီး email ၀င်တိုင်း remember this computer ကိုတာကို အမှန်ခြစ်မပေးမိပါစေနဲ့ . မိမိရဲ့ password ဟာ firefox browser မှာ ကျန်ခဲ့သလား မကျန်ခဲ့သလား သိချင်ရင် Tools >> options >> security ကို သွားလိုက်ပါ . ပြီးလျှင် saved passwords ကို နှိပ်ပါ . ပေါ်လာတဲ့ box ထဲက show password ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ . အဲ့မှာ ကျန်နေခဲ့လျှင် remove all ကို နှိပ်ပြီး ရှင်းလင်းခဲ့နိုင်ပါတယ် . cookies တွေ ကျန်နေခဲ့မှာ စိုးရင်တော့ ccleaner လို program မျိုးနဲ့ ရှင်းခဲ့လျှင် ပိုစိတ်ချနိုင်ပါသည် .
<<<<<<<<<<<< ဖြည့်စွက်ရေးသားပေးပါဦးမည် . >>>>>>>>>
Posted by ညီနေမင်း at 11:39 AM
ma November 28, 2009 at 5:03 AM
တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကိုညီကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Kyaw Khant June 20, 2011 at 1:01 AM